Ngaba UyaziBlogs zeMbewu? | Martech Zone
Ngaba UyaziBlogs zeMbewu?
NgoLwesihlanu, Septemba 26, 2008 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Indlela ebuyayo (i-snicker) kwiintsuku zokuqala zeblogi, ndiye ndafumanisa ukuba ukuphawula kwezinye iiblogi kuyimpumelelo enkulu. Uninzi lokukhula ngezo ntsuku zibangelwe kukuthatha kwam incoko kwezinye iiblogi.
Ngaphandle kokukhula okungaguqukiyo kwebhlog yam, ndiyaqhubeka nokuzama ukufuna kunye nokufumana iiblogi ezintsha ezibhala umxholo omkhulu kwiindawo ezinomdla. Ndizama nokuzazisa kwiikhonkco zam zemihla ngemihla. Ngeeblogi ezilikhulu ezilikhulu phaya, zininzi iincoko zokujoyina.
Yintoni iBlog Seeding?
Uphando kwaye Itekhnoloji zezona ndlela zam ziphambili zokufumana iiblogi endingazange ndazindwendwela ngaphambili. Unokuchitha imizuzu emi-5 okanye eli-10 ngosuku Imbewu yebhlog kunye nokuvezwa kumawakawaka abafundi abatsha. Ukuhlwayela iBhlog kukongeza nje kumagqabantshintshi eposti yenye ibhlog kwaye uqinisekisa ukuba une-backlink elungileyo kulwazi lwabo lwezimvo kwibhlog yakho. Sukuphawula nje ukuphosa ikhonkco phaya, nangona-oko kukugaxana. Bhala ikopi enyanzelisayo, uncome ibhlog, okanye unike ubungqina ukuba awuvumelani nabo. Ukutyeba kwakho ukuphawula, kokukhona uya kufumana ingqalelo.
Ukuhlwayelwa kwebhlog kwahlukile kwi-Spamming yeNgxelo
Inkuthazo yokuBekwa kweBhlog yahlukile kwi-Spamming yeNgxelo. Amagqabantshintshi Spamming ngumnqwazi omnyama sem indlela yokuzama ukufumana iiblogi ezingazisebenzisiyo nof kwaye ufumane amanqanaba aphezulu kukunika.
Yongeza kwingxoxo yeblogi ebuzwayo. Mhlawumbi uxhasa iposti ngomxholo osondeleyo okhoyo okanye uphikisa umxholo okhoyo. Nokuba yeyiphi na indlela, kunjalo Umxholo oveliswe ngumsebenzisi ukuba nayiphi na ibhlogi mayixabise.
Yazisa kwibhlog yakho.
Okubaluleke ngakumbi, ikwazisa abaphulaphuli bebhlog! Sukujongela phantsi ukuba bangaphi abantu abafunda iibhlog kwaye FUNDA iikhomenti.
Yongeza Imbewu yebhlog kwingxowa yakho yeendlela zentengiso zokwakha igunya okanye ukuphakamisa ulwazi ngebhlog yakho, imveliso, inkonzo okanye inkampani. Isebenza kakuhle kakhulu!
tags: Imbewu yebhlogzeblogakubloga
Isicatshulwa esikwifowuni: Bangaphi abalinganiswa basekhohlo
Sep 27, 2008 ngo-11: 34 PM
Iposi egqwesileyo uDouglas. Ndisebenzise le ndlela kakhulu kwaye nakanjani, iyasebenza! Ndifumanise ukuba awunyanzelekanga nokuba ukhathazeke ngokushiya ikhonkco emzimbeni wezimvo zakho konke konke, ngaphandle kokuba wenze ezo ntengiso lixabiso elibalulekileyo kwincoko. Ukuba into oyithethayo iyintengiso yokwenene kwincoko, endaweni yokuba ube yingxelo ethi "nam", iindwendwe ziya kuthi ngokwendalo zitsale ibhlog yakho.
Ukuya kuthi ga ngoku kwiibhloko ezingafakwanga, zonke iibhloko zam azinantsingiselo kwaye ewe, zinomtsalane kakhulu kugcino-magama. Nangona kunjalo, ukugxila kwiibhloko ezingabalulekanga akunantsingiselo kwabo bafuna ukwakha ukukhula kwezinto eziphilayo. Ukuphakanyiswa okuncinci okufumanekayo ngaphandle kwekhonkco elingenanto kwiiblogi zezimvo azibalulekanga. Apho ukuphawula kunomvuzo wokwenene kubudlelwane obakhayo kunye nomtsalane wendalo owenzayo. Abanye baya kukhawuleza ukunxibelelana nezithuba zakho ngokwasemzimbeni ukuba awusoloko ugaxekile izimvo zabo ngamakhonkco.
Iposti enkulu! Unomfundi omtsha. 😉
Sep 28, 2008 ngo-7: 24 PM
Njengeblogger ye-novice, bendineentloni zokuphawula kwezinye iiblogi. Iposti yakho indibeke nkqo.
Yintoni ibhlog engenanto kwaye ndazi njani ukuba ndinayo?
Agasti 6, 2009 ngo-10: 28 PM
Enkosi uDoug. Olu lwazi lwaluncedo kum ekuzameni ukwahlula imbewu yebhlog ngokuchasene nogaxekile kubathengi bam abancinci. Kwakhona kundikhuthaze ukuba ndinike izimvo kwezinye iiblogi zam! 🙂
Sep 22, 2011 ngo-12: 32 PM
Ngesizathu esithile esingaqhelekanga, andikwazi nokungena kwiTechnorati, kodwa yenye into leyo.
Into oyichazileyo isebenza kakuhle kublogi ezithile okanye zeshishini ezithile. Kwiibhlog zeshishini, indlela efanayo ayisebenzi kuba iibhlog zeshishini zibonwa njengendlela yokukhuthaza ishishini kunye nokubandezeleka ngenxa yoko.
Andikayiboni ibhlog yebhizinisi enezinga eliphezulu lezabelo okanye izimvo rhoqo.
Sep 22, 2011 ngo-1: 20 PM
Ukuba ibhlog yeshishini imiselwe ukuthengisa imveliso, ndiyavuma ukuba kunzima ukufumana izimvo. Nangona kunjalo, xa ibhlog inenjongo yokuthengisa ngaphandle, kukho iitoni zamathuba.
https://blog.facebook.com/ -Ufumana amashumi amawaka amagqabaza. Ndiyaqonda ukuba liqonga lentlalontle, nangona… kwaye mhlawumbi ngaphandle kuba baneebhiliyoni zabathengi 🙂
http://www.lulu.com/blog/ -Ukuba umxholo uchanekile, uya kubona umsebenzi omncinci apha.
Sep 23, 2011 kwi-5: 01 AM
Kwiibhlog zeshishini, njengoko sele utshilo, ibhlog kufuneka ijolise kubanzi kwaye ingathintelwanga ekucoceni iimveliso okanye iinkonzo. Kudala ndenza umxholo wobulunga bebhlog yethu yequmrhu kwaye isentle kakuhle ngokotyelelo kodwa hayi ngendlela yokusebenza komsebenzisi.
Ndiza kuhlala ndizama kwaye ndiyabulela ngolwazi oluluncedo.
Oktobha 7, 2011 ngo-10: 01 PM
Enkosi Doug! Olu luvo oluhle kuthi sonke kwiibhlog. Kudala ndipapasha kwibhlog yam njengeyona nto ndiyithandayo. Ngoku, ndiyaqala ukufumana abalandeli ukusukela oko ndacima iBlogspot. Kudala ndibhala amagqabantshintshi, kodwa andikhange ndibandakanye ikhonkco lam lebhlog.
Enkosi ngolwazi! http://www.nortoncreative.com/rubberchicken/
Jul 11, 2012 ngo-1: 56 PM
Kodwa amagqabantshintshi ecaleni, yeyiphi enye into onokuyicebisa ngembewu yebhlog? Ngaba usebenzisa izixhobo ezinje ngePinterest? Reddit okanye Digg?